Vaovao - Fanaterana ny filam-pamokarana PET Rope Filament an'i Tajikistan
Fanaterana ny filam-by PET Rope filament Production any Tajikistan
Tamin'ny 10 jona 2020 dia nandamina fandefasana entana ho an'ny orinasam-pamokarana filam-by PET izahay izay nasain'ny mpanjifa Tajikistan. Ny fandefasana amin'ny lamasinina no ahafahan'ny mpanjifa mandray haingana ny entana.
Noho ny fitarihan'ny COVID-2019, saika ny firenena rehetra eran'izao tontolo izao dia efa nampihidy ny ambaratonga isan-karazany mba hifehezana ny fihanaky ny COVID-2019.
Saingy noho ny fifindran'ny olombelona-to-olombelona COVID-2019 dia haingana dia haingana ny fiparitahana, indrindra any amin'ireo firenena izay mihidy tanteraka na tsy manaraka fikajiana siantifika. Ny isan'ireo olona voamarina tamin'ny COVID-2019 dia maneran-tany dia nahatratra 7.000.000 teo ho eo, isa tsy mampivarahontsana.
Na eo aza izany dia efa nahazo fanontaniana maro avy amin'ireo mpanjifa vahiny ny vokatrao, ary tena tsara ny tahan'ny fanamafisana. Ny tsipika famokarana vita amin'ny tady PET izay narahin'ny mpanjifa Tajikistan tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia vita sy natolotra ara-potoana.
Ity tsipika famokarana ity dia manamboatra fitaovana vita amin'ny kitapom-bolan'ny 100%. Avy amin'ny famokarana filam-bolan'ny tady mankany amin'ny famokarana vokatra tady amin'ny masinina tady twisting, dia mandeha ho azy daholo izany, ary saika tsy mila miasa. Satria ny akora akora dia ahodinodina ihany koa, ambany ny vidin'ny famokarana, tena azo antoka ny tombom-barotra ho an'ny mpanjifantsika amin'ny fivarotana ny vokatra tady eny an-tsena. Ity andalana famokarana filam-by PET ity dia azo ampiasaina ihany koa amin'ny famokarana harato azo antoka plastika, harato famonoana bibikely sns.
Ho an'ny vokatra misy anay, tsy maninona avy amin'ny serasera mpiasan'ny varotra voalohany, ny fanamafisana ny filaminana, ny famokarana sy ny fanaterana fitaovana, ny mpanjifa dia mahazo fahafaham-po. Manantena izahay fa ny mpanjifa dia afaka mahazo ny fitaovana haingana araka izay azo atao, mametraka azy amin'ny famokarana ary mahazo tombony tsara. Tsy tonga ho eo am-pandinihana ny fitarihan'ny coronavirus manerantany amin'ny fidinan'ny tsena.
Hiaraka amin'ireo vokatra manana kalitao avo lenta, serivisy mahomby isika, fiaraha-miasa mandresy, manolo-tena hanompo mpanjifa bebe kokoa ary mamorona tombony betsaka ho an'ny mpanjifa.